စတော်ဘယ်ရီ | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
tagged posts "စတော်ဘယ်ရီ"
သငျသညျအစွန်းအထင်းသို့မဟုတ်အဝါရောင်အံသွားဖယ်ရှားပစ်ရကိုကူညီနိုင်ကြောင်းထိုအရပ်၌များစွာသော whitening ထုတ်ကုန်ထွက်ရှိပါတယ်. သငျသညျ whitening strips တွေတွေ့လိမ့်မည်, Whiten သို့မဟုတ် Whiten strips တွေနှင့်ပြည့်စုံတစ်ဗန်း. ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများအကုန်အကျပရော်ဖက်ရှင်နယ် Whiten ပေါင်းသည်တလုံးအကြီးအအခြားနည်းလမ်းများမှာ.
စတော်ဘယ်ရီအံသွား Whiten မှသဘာဝလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. စတော်ဘယ်ရီမှာတွေ့ရတဲ့သဘာဝဒြပ်ပေါင်းများဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြု. မပါဘဲအံသွား Whiten လိမ့်မည်. သင်အံသွားပေါ်တိုက်နိုငျသောငါးပိသို့စတော်ဘယ်ရီ mash ပြီးတော့ကြောင့်အများအပြားမိနစ်ထိုင်သို့မဟုတ်တစ်ဝက်တွင်တစ်ဦးစတော်ဘယ်ရီဖြတ်ကြကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်, ထို့နောက်ခဏအဘို့သင့်အံသွားပေါ်သို့ကပွတ်သပ်.
အကြံပြုချက်! သစ်သီးများအံသွားအချိန်တချို့ Whiten ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနှင့်သဘာဝနည်းလမ်း. သင့်ရဲ့အံသွား whitening မှာအလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်သောသူအချို့အသီးအပွတခုရဲ့ဥပမာစတော်ဘယ်ရီနှင့်လိမ္မော်သီးပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့အံသွားစေ့စပ်အံသွား regimen whitening အိမ်မှာအသုံးမပြုမီသန့်စင်ကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ. သငျသညျစင်ကြယ်သောအံသွားပေါ်သူတို့ကိုလျှောက်ထားလျှင်အံသွားထုတ်ကုန် whitening အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကိုသင် Whiten ရန်စတင်သောအခါအသင်တို့၏အံသွားမသန့်ရှင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်ရလဒ်မညီမညာဖြစ်နေသောနှင့်သိသာစေခြင်းငှါအကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ.
strips တွေ whitening အံသွားကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါနှင့်မြင့်မားတတ်နိုင်များမှာ. သငျသညျရိုးရိုးသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်ချွတ်ထားပါရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အံသွားသန့်ရှင်းရေးနှင့် whitens အဖြစ်ထို့နောက်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းအဲဒီမှာကထွက်ခွာ. ပြီးတာနဲ့လူကြိုက်များ, whitening strips တွေကွောငျ့, သူတို့ဆင်းရဲသားကိုရလဒ်များကိုအများအပြားနှင့်အတူမျက်နှာသာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ.
အကြံပြုချက်! ထုတ်ကုန် whitening သွားသင်အသုံးပြုနေသောထုတ်ကုန်ရန်သင့်အံသွားအထိခိုက်မခံစေခြင်းငှါ. ဒါဟာသာယာယီသည်ပင်သော်လည်းနာကျင်ဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်မသောက်ရသောအခါပြုမိသွားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ် Whiten ရှိခြင်းပြီးနောက်အလွန်သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်၏သွားသူတို့ whitened ခဲ့ကြပြီးနောက်အစွန်းအထင်းကိုစုပ်ယူပိုမိုလွယ်ကူစွာစွန်းထင်းရလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့အသစ် whitened အံသွားပြီးနောက်မှောင်မိုက်ရောင်စုံအစားအစာများနှင့်အချိုရည်များကိုရှောင်ရှားရန်အရေးကြီးသည်. ကော်ဖီအလွယ်တကူသင့်ရဲ့အံသွားကစုပ်ယူပါလိမ့်မည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို၏ဥပမာတစ်ခုနှင့်အရောင်ပြောင်းစေနိုင်ပါတယ်.
သင်တစ်ဦးထူးအဖြူအပြုံးရဖို့လုပျနိုငျသောအရေးအပါဆုံးအရာကပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးအတှကျသွားဆရာဝန်ကိုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်. တိုင်းစင်ကြယ်သောအဘို့သွားကြဖို့သေချာပါစေ6လများ. အမြဲတမ်းသွားဆရာဝန်မှာသင်အကြာတွင်မမေ့မလြော့ပါဒါကြောင့်စဉ်သစ်တစ်ခုရက်ချိန်းကို set up ဖို့သတိရပါ. ကြိုတင်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခဖြင့်သင်တို့ကိုသတိပေးရန်သင်၏ပါးစပ်တွင်းရုံးကိုမေးပါ.
အကြံပြုချက်! တိုင်းမုန့်ညက်အစွန်းအထင်းမှအခမဲ့သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားနိန်. အများစုကအစားအစာများနှင့်အဖျော်ယမကာသင့်ရဲ့အံသွားကိုရှုတ်ချဖို့အလားအလာရှိသည်.
sugary အစားအစာများကိုစားသောက်ပြီးနောက်သင်အသုံးပြုတဲ့သေးငယ်တဲ့သွားပွတ်တံသယ်. ဤရွေ့ကားသကြားလုံးကိုသင့်အံသွားကပ်, နှင့် staining ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသို့မဟုတ်သင်ပြီးသားရှိစေခြင်းငှါအဘယျအမှထည့်ပါ. အချိုချဉ်စားပြီးနောက်, အချိန်ရဲ့တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအဘို့သင့်အံသွားတိုက်. သွားတိုက်ဆေးမလိုအပ်ပါဘူး; ကိုယ့အံသွားပွတ်တိုက်ပြီးတော့ရေနှင့်ကောင်းစွာသုတ်ခြင်း.
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ, ပါအောက်ဆိုဒ်နဲ့ပေါင်းစပ်သည့်အခါ, ဘက်တီးရီးယားလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အရည်အသွေးမြင့်သွားတိုက်ဆေးဖြစ်ပေါ်လာသော. အကြားအဘို့အဖြေရှင်းချက်နှင့်သင်၏အံသွားနိန်ကြိုးစားပါ 5-10 မိနစ္မ်ား. အမြဲတမ်းသင်အလွန်အမင်းခက်ခဲနိန်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရကြမည်, အရောအနှောကိုတကယ်သင့်ရဲ့သွားဖုံးစိတ်ဆိုးနိုင်ပါတယ်အဖြစ်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွားအဖြူရှိနေဆဲသေချာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးမှသွားဆရာဝန်လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ပုံမှန်ချိန်းတည်ထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သာတဲ့ professional သန့်ရှင်းရေးပေးပြီးသွားကျောက်တည်တည်ဆောက်-up ကနှင့်အရောင်ပြောင်း၏အနှစ်ပြန်ပြင်နိုင်ပါသည်.
သင့်ရဲ့အံသွား tingling စတင်သို့မဟုတ်အံသွား whitens တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအထိခိုက်မခံခံစားရလျှင်, ချက်ချင်းအသုံးကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်း. သင်သည်သင်၏သွားနှင့်ကိုက်ခဲသင်သိထက်ပိုမိုအပျက်အစီးလုပ်နေနိုင်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ခံချက်ရဖို့ကအမှတ်မှာအကောင်းဆုံးက. သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏အသွားဆရာဝန်ကိုမေး.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွားပုံမှန် FLOSS နှင့် Brush သင့်ရဲ့အံသွား whitening အတွက်အအောင်မြင်ဆုံးနည်းလမ်းများတို့တွင်. ဒီနည်းပညာကိုသုံးခြင်းဖြင့်, သငျသညျပြား buildup လျှော့ချလိမ့်မည်, အံသွားအရောင်ပြောင်းတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း.
အမြဲတမ်းသင်အသုံးပြုအိမ်တွင် Whiten ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာရှိသမျှသောလမ်းညွန်အတိုင်းလိုက်နာ. ထုတ်လုပ်သူအပေါ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဤသည်ကိုသင့်သွားဖုံးနှင့်အတိအကျနှင့်သာထုတ်ကုန် whitening သင့်ရဲ့ teeth.Use သွားနှင့်ကိုက်ခဲပျက​​်စီးဆုံးရှုံးမှုစိတ်ဆိုးနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျလုပ်ထုံးလုပ်နည်း whitening တစ်ဦးအံသွားခံရပြီးနောက်, သငျသညျတိုင်းအစာစားပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်အရေးကြီးပါတယ်ထိုသို့. သငျသညျအစာကိုသင့်အံသွားပေါ်တက်ဆောက်ကြကုန်အံ့ အကယ်., ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခံတွင်း၌ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. ဘက်တီးရီးယားသင့်ရဲ့အံသွားပျော့ပြောင်းနိုင်, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းဖို့သူတို့ကိုပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရာ.
အကြံပြုချက်! စီးကရက်ကိုရှောင်ပါ, ကော်ဖီနှင့်ခိုင်ခံ့သောလက်ဖက်ရည်. ဤအမှုအရာအညိုသင့်ရဲ့အံသွားဖွင့်နိုင်.
တစ်ဦးကောက်ရိုးတဆင့်ကော်ဖီနှင့်အခြားအစွန်းအထင်းအရည်ကိုသောက်သုံးလည်းဖြူအံသွားရတဲ့၏ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါကောက်ရိုးအံသွားအစွန်းအထင်းစေအချိန်ပမာဏကိုပေးသည်. အဆိုပါအရည်ကိုသင့်အံသွားကိုရှောင်ကွင်းနှင့်ဖြောင့်သင်၏နှုတ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့အံသွား Whiten မှသာမန်အဖြစ်သွားပွတ်တံနဲ့ဖြီးအပေါ်စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်ကိုသွင်းထား. အသီးဖျော်ရည်ကိုမှအက်ဆစ်သင့်ရဲ့သွားကြွေလွှာ softens, ဤသို့သင်သည်သင်၏အံသွားကနေအရောင်ပြောင်းတာကိုပယ်ရှင်းဖို့အားဖွင့်. သင်ဤနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးဝေးလျော့နည်းသန်းထက်ဒေါ်လာအဘို့သင့်သန်း-ဒေါ်လာစျေးအပြုံး restore နိုင်ပါလိမ့်မယ်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွား whitening ပြီးနောက်, ပြုံးစောင့်ရှောက်ဖို့သင်သတိရဖို့ Vaseline လျှောက်ထား. ဒါဟာအဆင်သင့်အရသာရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်နာရီစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အစွန်းအထင်းမှသင်၏အံသွားကာကွယ်မှုပေးသည်တဲ့ပိတ်ဆို့ဖန်တီးခြင်းမှာကောင်းလှ၏.
သငျသညျကွီးစှာသောအပြုံးသိမ်းထားချင်ကြောင်းသေချာစေရန်မှန်မှန်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်. စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အခြားပစ္စည်းများသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်တည်ဆောက်နှင့်အချို့သောအချိန်ပြီးနောက်သူတို့ကိုရှုတ်ချနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအဖြစ်ကာလပတ်လုံးသင်တို့ပုံမှန်အစည်းအဝေးပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အံသွား-နိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အဖြစ်သွားအရောင်ပြောင်းအကြောင်းဖဲ့ခြွေဖို့ရှိသည်မဖြစ်သင့်.
ရောင်စုံ mouthwashes သုံးပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ. ဤရွေ့ကား mouthwashes သင့်ရဲ့အသက်ရှုအမြင်ကြည်လင်စေရန်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စဉ်၌သင်တို့၏အံသွားကိုရှုတ်ချပါလိမ့်မယ်. အရက်အများဆုံးရှိသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကြောင်းကိုသင်၏လျှာသည်နှင့်သွားဖုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးသင့်ရဲ့သွေးကြောထဲသို့စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်.
အကြံပြုချက်! သူတို့ကိုသင်နိန်ဖြင့်သင့်အံသွားကာကွယ်. သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့ခြေလှမ်းနောက်ထပ်ယူစေခြင်းငှါ, နှင့်သင့်အံသွား whitens တဲ့သွားတိုက်ဆေးကိုစတင်သုံးစွဲ.
ဘာမှဝယ်ရှေ့၌သင်တို့အံသွား Whiten ဖို့ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့သွားဆရာစကားပြော. သင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်ဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထွက်ရှိပါသည်အရာကိုသိပါလိမ့်မယ်, နှင့်သူသို့မဟုတ်သူမလည်း whitening အံသွားအဘို့အအချို့သောစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. သင်ပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွားမဝင်တဲ့အလေ့အထလုပ်ပါ. plaque ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်မဝင်အကူအညီအထောက်အပံ့များ, မူသောသင်တို့အသွားအရောင်ပြောင်းပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
သင်၏နှုတ်ကိုနာကျင်စတင်သည် အကယ်., whitening ချက်ချင်းရပ်တန့်. whitening ထုတ်ကုန်သုံးနေစဉ်သင် sensitivity ကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, သင်တစ်ဦးသွားဆရာဝန်နှင့်အတူကိစ္စဆွေးနွေးရန်နိုင်သည့်တိုင်အောင်သင်ချက်ချင်းဖောက်ပြန်တဲ့ထုတ်ကုန်၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းရမယ်.
ဖြူအံသွားဘို့, လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီမသောက်ပါနဲ့. ဤရွေ့ကားအချိုရည်အံသွားအရောင်ပြောင်း. သငျသညျကော်ဖီသောက်ရန်ဖြစ်လျှင်, သငျသညျပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းပြီးနောက်သင်သည်သင်၏ပါးစပ်ထွက်သုတ်သေချာအောင်. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အံသွားပေါ်ဤအကြောင်းအချိုရည်များမဆိုဆိုးကျိုးများကိုနှေးကွေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
အကြံပြုချက်! သင်သည်သင်၏အံသွားလည်းဖြူမကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျ Citrus အသီးကိုစားခြင်းငှါမကြိုးစားပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, Citrus အသီးအသီးဖျော်ရည်ကိုရှောင်ရှား.
တစ်ဦးသွား whitening လုပ်ငန်းစဉ်စကားပြော. အခေါင်းပေါက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပါးစပ်တွင်းအလုပျအတှကျ check လုပ်ထားတဲ့ပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွား Whiten မနေပါနဲ့.
သင်တစ်ဦးအမှုန့်သို့ခြောက်သွေ့သောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်များနှင့်လိမ္မော်ရောင် peels ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်သင့်ပါတယ်. ဒီအရောအနှောနှင့်အတူဤအမှုန့်နှင့်ဖြီးဖို့ရေ Add. ဤသို့ပြုလည်းသွားဖုံးရောဂါနှင့်အခေါင်းပေါက်ကိုကာကွယ်တားဆီးကူညီပေးပါမည်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွား Whiten မှ walnut သစ်ပင်တပင်အခေါက်ကိုသုံးပါ. အခေါက်၏သေးငယ်တဲ့ bit နဲ့ ယူ. နှင့်သင့်အံသွားပေါ်မှာပွတ်သပ်.
သင့်ရဲ့အံသွား Whiten မှဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါ. သငျသညျရိုးရိုးဖြေရှင်းချက်သို့နှစ်ပြီးသော washcloth သို့မဟုတ်မည်သည့်ဝါဂွမ်းပစ္စည်းကိုနှစ်ဖွငျ့ဤလုပျနိုငျ. ပုံမှန်ပေါ်တွင်သင်၏အံသွား၏ဒေသများတွင်ကျော်စိုစွတ်သောအထည်ကိုပွတ်သပ်. အဆိုပါပါအောက်ဆိုဒ်ပေါ့အစွန်းအထင်းကူညီပေးသည်နှင့်လက်ဆေးအထည်တစ် scrubber အဖြစ်ပြုမူလိမ့်မည်.
တချို့ကသဘာဝကကုစား Whiten အံသွားကူညီပေးပါမည်, ထိုကဲ့သို့သောပန်းသီး cider ရှလကာရည်အဖြစ်. ဤနည်းလမ်းကိုသင်၏နှုတ်၌ဘက်တီးရီးယားနှင့်အစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ကူညီပေးသည်, ဒါကြောင့်ဖြစ်စဉ်၌သင်တို့၏အံသွားဆေးကြောအဖြစ်. တစျနေ့တစျကွိမျ Gargle, ယေဘုယျအားဖြင့်နံနက်ယံ၌, ပန်းသီး cider ရှလကာရည်နှင့်အတူ, နှင့်သင့်အံသွားနိန်ကနောက်ဆက်တွဲ.
အကြံပြုချက်! ဆားနှင့်သင်၏အံသွားတိုက်. ဆားသဘာဝအကြောင်းတစ်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်အံသွားပေါ်အစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
ရေနှင့် Chase အစွန်းအထင်းဖြစ်စေတဲ့အချိုရည်. ရေလြျှောတစ်ဖန် setting ထဲကနေသောက်စရာဖြစ်စေတဲ့အအစွန်းအထင်းကိုကာကွယ်တားဆီး. နောက်ထပ်စိတ်ကူးမှောင်မိုက်-ရောင်စုံအချိုရည်သောက်သုံးတဲ့အခါကောက်ရိုးကိုအသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
ငှက်ပျောသီးအခွံနှင့်သင်၏အံသွားတိုက်. ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးတန်ဖိုးမကြီးဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်. သင်ငှက်ပျော peeled တပြိုင်နက်, သူတို့ကိုသင်တိုက်ရုံရှေ့၌သင်တို့အံသွားကိုကျော်ခွံကို run. ဤသို့ပြုပြီးနောက်, သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းအဖြစ်ကိုသင့်အံသွားတိုက်. ဒါဟာသင်ချက်ချင်း Whiten ရလဒ်များကိုအားငါပေးမည်.
အစွန်းအထင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်သင့်အံသွားပါစေရသည့်လိမ္မော်ရောင်အခွံရဲ့ပျော့ပျောင်းသောအခြမ်းကိုသုံးပါ. သင်တို့သည်လည်းထုမြေပင်လယ်အော်နှင့်အတူအခြောက်လှန်းလိမ္မော်ခွံရောထွေးနိုင်ကိုသင့်အံသွားဘို့အငါးပိအောင်အရွက်. လူအပေါင်းတို့သည်အသီးသကြားဖယ်ရှားပစ်ရန်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် afterwords သင်၏နှုတ်သုတ်ဖို့သေချာပါစေ.
သူတို့သည်သင့်လည်းဖြူအံသွားပေးလိမ့်မယ်ဆိုဆိုသွားတိုက်ဆေးကိုနားထောင်မနေပါနဲ့. သူတို့ကသင်တစ်ဦးအနည်းငယ် whitening အကျိုးသက်ရောက်မှုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နည်းစနစ်ဖြစ်နိုင်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းနာ​​းလည်သဘောပေါက်. သင်ဆဲတစ်ဦး whitening သွားတိုက်ဆေးကိုအသုံးပွုဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, အထဲတွင်ဆိုဒါဖုတ်ပြီတယောက်ရဖို့သေချာအောင်.
တစ်လိမ်းဆေးနှင့်တကွသင်ပေးရန်သင့်သွားဆရာဝန်ကိုမေးသင့်ရဲ့အံသွားလည်းဖြူကွညျ့ရှု Whiten ကိုကူညီအိမ်မှာအသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်. ဒီ technique ကိုတက်မှရှစ်ရိပ်ဖြင့်သင့်အံသွားစေနိုင်!
သငျသညျလည်းဖြူအံသွားရဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, သူတို့ကိုအဖြစ်မကြာခဏသင်တတ်နိုင်သလောက်သန့်စင်ရန်သွားဆရာဝန်ကိုသွား. ပုံမှန်ပါးစပ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးကိုသင်အံသွား regimen သင်တို့၏ Whiten အတွက်ပါဝင်နိုင်ပါသည်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏. သငျသညျတိုင်းခြောက်လအနည်းဆုံးစင်ကြယ်သောအဘို့သင့်သွားဆရာဝန်သွားရောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
သငျသညျစနစ်တကျသင့်ရဲ့အံသွား type ကိုတိုက်ဖို့သင်ျာတံတစ်ချောင်းရှိတယ်သေချာဖို့လိုပါတယ်. လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်စုဆောင်းပြားနှင့်အစွန်းအထင်းမဖယ်ရှားမှာအထူးသဖြင့်ကောင်းလှ၏. ဒီသဘာဝသန့်စင်ခြင်းနှင့်လည်းဖြူကိုသင့်အံသွားရလိမ့်မည်.
သငျသညျသွားတိုက်ဆေးနှင့် FLOSS နှင့်အတူနေ့စဉ်အခြေခံနောက်သို့လိုက်လျှင်သင်သည်သင်၏အံသွားသန့်ရှင်းရေးနှင့် Whiten သင့်တယ်. ဒါကြောင့်အစွန်းအထင်းမဖယ်ရှားမှာမြင့်မားထိရောက်သောရဲ့အဖြစ်သဘာဝ Whiten ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါဆံ့ကြောင်းထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပါ.
သင်သည်သင်၏အံသွားကိုရှုတ်ချနိုငျသောအရောင်ခြယ်ပစ္စည်း၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူမည်သည့် whitening procedure.Drinks ပြီးကောက်ရိုးကို အသုံးပြု. လည်းဖြူကိုသင့်အံသွားစောင့်ရှောက်နိုင်. ထိုကောက်ရိုးကိုသုံးပြီးအစွန်းအထင်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ရှိခြင်းမှရှေ့အံသွားတားဆီးလိမ့်မည်.
crunchy ဖြစ်ကြောင်းထှနျးအစားအစာများကိုစားပါ. crunchy အစားအစာများ၏ပွန်းစားခြင်းသင်ကသူတို့ကိုဝါးတဲ့အခါသင့်ရဲ့အံသွားအခွင့်တန်ခိုးကိုသန့်ရှင်းရေးထည့်ပါ. သူတို့ကိုမြေတပြင်လုံးကိုကိုက်, သူတို့ကိုတက်မဖြတ်ဘူး!
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံသွားနိန်များအတွက်စတော်ဘယ်ရီငါးပိ Make. စတော်ဘယ်ရီရှည်လျားသင့်ရဲ့အံသွား Whiten မှမှတ်ခဲ့ကြ. ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအချို့သောငါးပိထရောထွေးစေရန်, သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် 1/4 ခွက်ကိုရေ, မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (1/2 ခွက်) mashed ခဲ့ကြကြောင်းနှင့်သုံးစတော်ဘယ်ရီ.
ဆေးပြင်းလိပ်သို့မဟုတ်စီးကရက်ဆေးလိပ်မနေပါနဲ့. ဤနှစ်ဦးစလုံးအရောင်တွေရရန်သင့်အံသွားအရောင်ပြောင်းဖို့သက်သေပြခဲ့ကြ. အဝါရောင်လှည့်မှသင့်အံသွားစောင့်ရှောက်ဖို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါ. သငျသညျဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ရုန်းကန်နေရနေတယ်ဆိုရင်, ဖြစ်စဉ်၌သင်တို့ကိုအထောက်အကူပြုဖို့အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်ဆေးအဘို့သင့်သမားနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး. သငျသညျအပြုသဘောဆောင်တဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်အစိုင်အခဲအကွံဉာဏျအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်.
ယနေ့ခေတ်, သင်အမှန်တကယ်အဝါရောင်အပြုံးနှင့်အတူတက်ချပြီးအဘို့အဘယ်သူမျှမဆင်ခြေများ. သငျသညျအိမျသို့အသုံးပြုမှုအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အများအပြား whitening အံသွားထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းကိုသုံးခြင်းဖြင့်တောက်ပသောအပြုံးရနိုင်. သငျသညျအိမျမှာကိုအသုံးပွုနိုငျအဆိုပါ Whiten ပစ္စည်းများအများကြီးလျော့နည်းစျေးကြီးသွားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Whiten ထက်မျ​​ားမှာ, ထိုသူတို့အခြေခံအားဖြင့်သင်တူညီတဲ့ရလဒ်ပေး.
Whiten သွားလမ်းညွှန် Posted by ကို - ဇွန်လ 5, 2016 1:02 နံနက်
categories: Whiten သွားဖို့အခြေခံပြီးမူလစာမျက်နှာ Tags:: သစ်သီးများ, စတော်ဘယ်ရီ, whitening အံသွား, whitening ထုတ်ကုန်, whitening အံသွား
လွယ်ကူသွား Whiten မှသဘာ Way ကို
သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အံသွား Whiten သဘာဝလမ်းသူအပေါင်းစျေးကြီးပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲ, ကိုယ့်နောက်ကျောရှေးကြိမ်မှသွား. အဘွားနှင့်အမေဖြစ်နိုင်ပြီးသားကိုသိသောနေအိမ်ကုစားကိုသုံးပါ. တစ်နာရှိလြှငျ, နာခြင်း, ဖြတ်, အခြားသူသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှ, ထိုအရပ်၌အမြဲအဖြေတစ်ခုသို့မဟုတ်ရောဂါပျောက်ကင်းတစ်နေရာရာမှာဗီရိုထဲကပုန်းအောင်းခဲ့သည်. တူညီတဲ့အံသွား Whiten သက်ဆိုင်. စဉ်းစားကြည့်ပါ အံသွား Whiten သဘာဝလမ်း အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့်အသုံးပြုသည့်ရလဒ်များကိုသူမြား၏အံ့သြဖြစ်.
သငျသညျစတော်ဘယ်ရီချစ်ပြီးသင်တန်း အကယ်. အဲဒါကိုမတည့်မဟုတ်, အချို့သောစတော်ဘယ်ရီ shortcake စေတစ်ချိန်တည်းမှာသင့်ရဲ့အံသွား Whiten. စတော်ဘယ်ရီတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အံသွား Whiten သဘာဝလမ်း. ကိုယ့သင်၏နှုတ်၌တစ်ဝက်နှင့်အရပ်ဌာန၌ကြီးမားသောစတော်ဘယ်ရီဖြတ်. အတွင်းသင်၏နှုတ်အတွင်းပိုင်းသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ. သူတို့အားလုံးပန်းရောင်အတွက်ဖုံးအုပ်သည်အထိအားလုံးသင့်ရဲ့အံသွားကူးသောသူအပေါင်းတို့သည် yummy စတော်ဘယ်ရီသီးဖျော်ရည်များနှင့်စတော်ဘယ်ရီပွတ်သပ်. ကောင်းတစ်ဦးဆယ်မိနစ်စောင့်ပါပြီးရင်သင့်ရဲ့သွားတိုက်ဆေးကိုသုံး. သင်တန်းကိုသင့်ရဲ့သွားတိုက်ဆေးလုံးကိုကသဘာဝနှင့်မျှမပွန်းစားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်သင့်. သငျသညျခငျြပုံကိုအဖြူပေါ် မူတည်., နှစ်ကြိမ်သငျသညျတိုက်ရသောနေ့ရက်အချိန်တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်ဤသို့ပြု. သည်းခံခြင်းဖူး, နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်သဘာဝလည်းဖြူအံသွားမြင်ရကြလိမ့်မည်. ဤသည်ကိုလည်းသင်၏အအံသွားပေါ်အစွန်းအထင်းကိုလျှော့ချဖို့ကော်ဖီကအစွန်းအထင်းများနှင့်အရာအားလုံးထက်နှင့်အတူကူညီပေးပါမည်.
သင်သည်သင်၏အံသွားအဘို့မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ၏စကားကိုကြားကြပေမည်. သငျသညျမရှိပါက, ထိုအခါသင်ကအရမ်းများမှာ, အလွန်ငယ်ရွယ်. လေးဆယ်ငါးဆယ်မှနှစ်အတွင်းမည်သူမဆိုဟောင်းမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါကြောင်း mom, သို့မဟုတ်အဘွားသိတယ် အံသွား Whiten သဘာဝလမ်း ကိုယ့အံသွားနိန်အားဖြင့်. ဟုတ်ကဲ့, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတိုက်ဆေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်. ဒါပေမဲ့, သငျသညျအဟောင်းတွေမျိုးဆက်မိဘများခဲ့လျှင်, ဆိုဒါဖုတ်စာရင်းကိုအပေါ်အမြဲခဲ့သည်. ဟုတ်ကဲ့တကယ့်အလုပ်မမဟုတ်တဲ့ပွန်းစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့အံသွားနိန်ရသောအခါဤသည်အဖြစ်လေးပုံတပုံကိုသာအသုံးပွုရ အံသွား Whiten သဘာဝလမ်း. ကိုယ့်သွားပွတ်တံစိုစွတ်သောရနှင့်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါသို့နှစ်ပြီးလျှင်. အရသာဖယ်ရှားပစ်ရန်နိန်ပြီးနောက်, သန့်ရှင်း minty ခံစားချက်အပေါင်းသည်သဘာဝအလျောက်ပါးစပ်ဆေးကိုသုံး. ယခု, သင်ရုံခေတ်အလွန်ဟောင်းနွမ်းသင်ယူ အံသွား Whiten သဘာဝလမ်းအိမ်မှာ.
ငါတို့ရှိသမျှသည်နှင့်အတူဆေးကြောသန့်စင်ရန်ရှာလကာရည်ကိုသုံးပါ. သငျသညျတစ်နေရာရာမှာအထဲတွင်ရှာလကာရည်များကိုဝယ်အဆိုပါသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်, သူတို့သညျအမှနျတကယျမှာသဘာဝလျှင်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, အံသွား Whiten သဘာဝလမ်း တွင် နေအိမ်, အဖြူရှာလကာရည်နှင့် ပတ်သက်. ဝက်ခွက်ကိုသာအသုံးပွုရ. သငျသညျလိုလျှင်လည်းဆားတစ်ဇွန်းနှင့် ပတ်သက်. ထည့်ပါ. အဆိုပါဆားကိုသင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းသွားဖုံးနှင့်သွေးထွက်တက်တင်းကျပ်ကူညီပေးသည်. ဒါဟာကိုကူညီသဘာဝဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျတညဉျ့မှာအိပ်သွားခင်မှာ, ရုံ mouthwash အဖြစ်အသုံးပြုရန်နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သုတ်ခြင်း. သင်၏သွားအားကောင်းဖြစ်လာကာလှပသောအပြုံးပြပါလိမ့်မယ်.
သင်အမှန်တကယ်ပျင်းရိဖြစ်ကြပြီးအိမ်မှာအံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လိုသူအပေါင်းနည်းလမ်းများသင်ယူခြင်းခက်လွန်းလှပါတယ် အကယ်., ကိုယ့်ပူစီနံသွားတိုက်ဆေးကိုသုံး. အနည်းဆုံးနှစ်ခုမှသုံးကြိမ်နေ့ကိုသုံးပါ. သင်၏သွားကျိန်းသေအရမ်းမြန်ဆင်းအရောင်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာလှိုင်းအင်တာနက်ကျော်နဲ့ပတျသကျတဲ့စိတ်ကူးများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်တတ်နိုင်သမျှ အံသွား Whiten သဘာဝလမ်း.
Whiten သွားလမ်းညွှန် Posted by ကို - ဇွန်လ 4, 2016 at 11:57 PM
categories: Whiten သွားသိကောင်းစရာများ Tags:: အံသွား Whiten သဘာဝလမ်း, စတော်ဘယ်ရီ, သွားပွတ်ဆေး, Whiten အံသွား